शेयर लगानीकर्ताले ३५ अर्ब ४० करोड गुमाएको बर्ष २०७५
२०७५ शेयर बजारका लगि निकै उतारचढावको बर्ष बन्यो । त्यस बर्ष लगानीकर्ताले ३५ अर्ब भन्दा बढी गुमाउन पुगे भने नेप्सेमा पनि झण्डै एकसय अंकको गिरावट देखियो । शेयर बजारका विषयमा पुरै बर्ष अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आलोचित बनिरहे ।
शेयर बाजरमा वर्ष २०७५ लगानीकर्ताकालागि सुखद् रहन सकेन् । २०७५ बैशाख २ गते १ हजार २ सय ७७ दशमलव ५५ अंकबाट खुलेको नेप्से परिसूचक वर्षको अन्तिम कारोबार भएको दिन चैत २८ गते १ हजार १ सय ८४ दशमलव शुन्य २ अंकमा बन्द हुन पुग्यो । समग्रमा नेप्सेमा ९३ दशमलव ५३ अंकको गिरावट आएको छ । यो अवधिमा लगानीकर्ताले ३५ अर्ब ३९ करोड १९ लाख रुपैयाँ गुमाएका छन् ।
त्यस्तै, अनलाइन प्रणालीमा पटक पटक आएको समस्याका कारण लगानीकर्ता निराश देखिए । वर्षको अन्त्यतिर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुद्रा तथा पूँजी बजारका लागि डोपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति गठन गरे । समितिले दिएको अधिकांश सुझाव कार्यान्वयनमा आएपनि लगानीकर्ताले अझै विश्वास गर्न सकेनन् ।
बजार सम्रमा घट्दो अवस्थामा नै रह्यो । वर्षको अन्त्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा बढ्ने आकलन लगनीकर्ताले गरेपछि भने शेयर परिसूचकमा केही सुधार आएको छ । तर शेयरको खरिद भन्दा विक्रीचाप अझैपनि उच्च हुँदा बजारले लगानीकर्ताले सोचे अनुरुपको बाटो समाउन भने सकेको छैन् ।
यसैबीच केही लगानीकर्ता र उद्योगी व्यवसायीहरु पनि आन्दोलित भए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ब्याजदर घटाउन दबाब दिए । त्यसपछि ब्याजदरमा पनि केही कमि आयो । तरपनि बजारले लगानीकर्ताले सोचेजस्तो बाटो लिन भने सकेन् ।